मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउनुका फाइदा यस्ता छन् ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउनुका फाइदा यस्ता छन् !
admin July 25, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 63 Views
पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै जरूरी कुरा हो किनकि यसले शरीरको विकासमा धेरै मद्दत गर्छ । अनि मरिचले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गरिदिन्छ । मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउँदा त झन् फाइदै फाइदा हुन्छ ।
रक्ताल्पता:मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउँदा आइरनको कमी पूरा हुन्छ र रगत कम हुने समस्या हराउँछ ।कब्जियत:मरिच र मनतातो पानीले शरीरको टक्सिनहरू हटाएर कब्जियत भगाउँछन् ।